Ọrụ nka Semaphore na-egosi ihe ịga nke ọma Nkwado ndị ọgbọ - Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ọrụ nka Semaphore na-egosi ihe ịga nke ọma Nkwado ndị ọgbọ
Ihe na November 9, 2021 site BLG Uche Udi: General
Arụ ọrụ nka gbadoro ụkwụ na ọdụ ọdụ semaphore ochie bụ nke kachasị ọhụrụ n'usoro otu nkwado ọhụrụ yana nkuzi nke Bromley, Lewisham & Greenwich Mind Peer Support program na Lewisham.
Ọrụ Art in a Box, nke ndị omenkà obodo Simon Poulter na Sophie Mellor mepụtara, nyere ndị sonyere ohere inyocha akụkọ ihe mere eme na-adọrọ adọrọ nke Telegraph Hill site na iji usoro okike. Akpọrọ mpaghara ahụ aha ọdụ ụgbọ mmiri semaphore nke nọ na elu ugwu ahụ site na 1795 ruo 1823, nke ekwuru na ọ bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ oloko sitere na akụkọ banyere mmeri Wellington na Waterloo gbagoro na London.
Simon na Sophie, ndị ha na Islington Mind rụkọrọ ọrụ, bịakwutere BLG Mind maka ịrụkọ ọrụ ọnụ wee kpọtụrụ Lewisham Peer Support Program Manager Smita Patel.
Simon kwuru, sị: “Smita nwere ọmarịcha ma na-akwado ya, mgbe anyị gwachara ya okwu, anyị kpebiri imepụta ihe na-emekọrịta ihe n'ịntanetị na ụlọ ọrụ anụ ahụ, ebe anyị chọpụtara na ndị mmadụ ji nwayọọ nwayọọ na-ejikọghachi ihe n'oge a na-efe efe. Ọ bụghị onye ọ bụla nwere ahụ iru ala ịbanye n'ọha ọha, dịka ọmụmaatụ."
Ndị otu nkwado ndị ọgbọ asatọ sonyeere mmemme izu isii ahụ, ụfọdụ site na Zoom na ndị ọzọ n'ime mmadụ na Telegraph Hill Community Center.
Ndị na-ese ihe na-eduzi ha, ha rụrụ ọrụ site na akwụkwọ ahaziri ahazi nke dabeere na Telegraph Hill. Ihe omume gụnyere ịmepụta ozi edịm n'iji otu koodu semaphore ọdụ ụgbọ mmiri ejiri; na-ese echiche site na Telegraph Hill; na imebe a collage mmetụta mpaghara.
Onye so na ya kere ibe a kpọrọ ya: "Ugbua, ọchịchịrị dị n'azụ anyị na n'ihu anyị ụbọchị obi ụtọ n'ụsọ osimiri, na okike na n'ìhè na-egbuke egbuke."
N'ịchọpụta ihe okike ha na ịmụta nkà ọhụrụ, Simon kwuru na ndị sonyere na-enwe mmasị na "oge pụọ na nrụgide nke ndụ na nchekwa, ohere nkekọrịta maka mkparịta ụka".
Otu n'ime ndị sonyere na nkuzi ahụ kwuru: “Enwere m ekele n'ezie maka ohere ịbanye na Zoom wee sonye n'otu ahụ. Ngwongwo nka e nyere m bụ nnukwu ego, na akwụkwọ ọrụ m chere na ọ mara mma. Simon na Sophie mere ka ihe dịrị nfe n'ezie site n'ụdị ha mepere emepe, na-agba ume.
“Ọ na-adị m ka m mụtara nkà ọhụrụ, na onyinye m nke collage na agba e nyere m nnukwu nnabata. Ọ naghị amasị m ịnọ n'ọnọdụ ebe nwoke nọ n'ọkwá dị elu, ma Simon nyere m aka ma zaghachi ìgwè ahụ nke ọma nke na n'oge na-adịghị anya enwere m ahụ iru ala iji kporie ndụ oge mmemme ahụ.
“Obi dị m ụtọ nke ukwuu Smita gbara m ume ịga. Echere m na nke a nwere ike ịkpọ m ọrụ na-aga nke ọma.”
Onye ọzọ so na ya kwuru, sị: “Simon na Sophie na-enwe nnọọ enyi ha ha na ha na-arụkọ ọrụ. Ha na-akpọrọ gị nzọụkwụ site na nzọụkwụ ma ị nwere ike ịnọdụ ala na-ekiri ma ọ bụ na-ese ha na ọsọ ọ bụla. Daalụ Simon na Sophie maka ihe niile. ”
Ọrụ a bụ naanị otu n'ime ọtụtụ ndị otu nkwado ndị ọgbọ, forums na ogbako na-arụ Lewisham Ọgbọ Nkwado Onye njikwa Smita Patel na ndị otu ndị ọrụ afọ ofufo raara onwe ha nye, ndị ha niile nwere ahụmahụ nke ọrịa ahụike uche.
Ihe omume a gụnyere njikwa nrụgide, uche na ịhụ anya, na ibi na ịda mbà n'obi, yana otu maka ndị na-eto eto, ụmụ nwanyị na ndị na-achọpụta dị ka LGBTQ +. A ga-ewepụtakwa otu ọhụrụ ahụike ụmụnwaanyị n'oge adịghị anya.
Smita kwuru, "Anyị na-agba ọsọ otu ụmụ nwanyị mana otu ọhụrụ a ga-eleba anya n'ihe gbasara ahụike ụmụ nwanyị, anụ ahụ na nke uche."
“Ebe anyị ga-elekwasị anya na ya bụ nsogbu ọbara ọgbụgba. Ndị GP adịghị achọ ịtu ụmụ nwanyị aka na ọrụ gynecology, kama na-agwa ha na ọ bụ otu a ka oge nsọ dị.
"Anyị chọrọ n'ezie inyere ụmụ nwanyị aka inwe ahụ iru ala maka ahụike ha na ikike ha ịkọwa nchegbu ha nye ndị ọkachamara."
Smita nwere ekele dị ukwuu nye ndị ọrụ afọ ofufo ahụ, bụ ndị rụsiri ọrụ ike ime ka ndị otu ahụ na-agba ọsọ n'oge mkpọchi.
O kwuru, sị: “Ewezuga ha, ọ nweghị nke ga-ekwe omume. “Ha niile agbalila elu. N'agbanyeghị na ụfọdụ n'ime ha na-echegbu onwe ha maka otu ndị otu a ga-esi rụọ ọrụ n'ịntanetị, ha mere ka ọ rụọ ọrụ na, n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ ga-edi oke nchegbu ndị mmadụ na mkpọchi.
"Ọ na-ewute ha nke ukwuu, ọ na-atọkwa m ụtọ otú ha si tachie obi."
Nkwado ndị ọgbọ Lewisham dị site n'aka onye ọkachamara nye onye ọ bụla dị ndụ, na-arụ ọrụ ma ọ bụ debanyere aha ya na GP na Lewisham onye na-enwe ahụike uche adịghị mma. Gaa leta Lewisham Ọgbọ Nkwado ma ọ bụ email smita.patel@lewishamwellbeing.org.uk maka ozi ndị ọzọ.
Maka ịmatakwu gbasara ọrụ ndị omenkà Simon na Sophie, gaa na webụsaịtị ha, Mechie na Remote.